Darpan Nepal – भित्री बस्त्र बारे यसरी ध्यान दिन सकिन्छ ? सधै जान्नुपर्ने कुरा !
त्यही कारण हामी बाहिरी बस्त्र खरिद गर्दा त्यसको रुपरंग, बनौट सबै कुरामा ध्यान दिन्छौं, ताकि आफुलाई सुहाउँदो होस् । तर, भित्री बस्त्र नि ?अब तपाईं एक कदम पछि हट्नुहुनेछ । किनभने भित्री बस्त्र खरिद गर्दा त्यसको बारेमा खासै ख्याल राख्नुहुन्न । किनभने तपाईं-हामीलाई लाग्छ, भित्री बस्त्र भनेको छोपिने चिज हो । देखिने भए पो राम्रो हुनुपर्छ ।
पेन्टीमा यी कुरा ख्याल गर्नुहोस् है?
Previous Postस्वयम्भूमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एकको मृत्यु, एक घाइते Next Postके रेखा थापा ‘मेगास्टार’ हुन् ?